Amin’ny tenim-pirenena hafa Ajouter des liens. Ny Baiboly protestanta no azo lazaina hoe zokiny tamin’ny dikan-tenin’ny Baiboly amin’ny fiteny malagasy ka ny fanapahan-kevitr’ireo mpandika teny voalohany dia matetika nolovan’ny taty aoriana , indrindra fa eo amin’ny fanagasiana ny anarana. Vao nanavao ny dikan-tenin’ny Baiboliny ny Katolika malagasy ka ahitana fahasamihafana araka endrika raha ampitahaina amin’ny dikanteny mahazatra ny mpamaky teo aloha. Itoviany amin’ny DIEM io. Ny anarana mponina dia tsy miafara amin’ny hoe – nina Ohatra: Manana ny lanjany eo amin’ny tantaran’ny Fiangonana eto Madagasikara sy ny tantaran’ny Firenenana malagasy ny Baiboly.
Mampiavaka azy ny fanatsofohana ny litera « h » amin’ny anarana izay efa mahazatra ka tsy nisy an’io litera io. John fa tsy Joany na Joana na dia tokony ho ny « o » no hialoha ny « a » ao amin’io anarana io. Ny tokony ho Iehody lasa Jiosy anglisy: Apokalypsy fa tsy Apokalipsy , Babylona fa tsy Babilona. Ampiasaina indrindra io dikan-teny io amin’ny vavaka iraisam-pinoana ataon’ireo fiangonana miray ao amin’ny Fiombonan’ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara FFKM.
Mikendry ny hananan’ny Kristiana miteny malagasy Baiboly iraisan’ny finoana kristiana samihafa ekiomenisma koa ireo mpabdika teny ireo izy io no mikendry ny hahazoan’ny mpiteny malagasy ankehitriny ny tian’Andriamanitra ho lazaina.
Nadika avy amin’ny dikan-teny anglisy New World Translation of the Holy Scriptures an’ny Vavolombelon’i Jehovah, izay nivoaka tamin’ny sady iaingan’ny fandikan-teny amin’ny fiteny hafa rehetra, io Baiboly io. Tamin’ny taona dia vita dika manontolo amin’ny teny malagasy ny Baiboly. Misy fahasamihafany amin’ny Baiboly protestanta sy amin’ny Baiboly katolika malagasy tranainy izy raha ny amin’ny anaran’olona sy ny anaran-tany ary ny anaran’ny boky ao amin’ny Baiboly no asian-teny.
Baiboly amin’ny finday – Ny Baiboly
Ny sasany amin’ireo teny grika miafara amin’ny – os indraindray dia lasa miafara amin’ny hoe – osy rehefa nohagasina. Nanakaiky ny fanononana anglisy ny mpandika teny malagasy amin’ny ankapobeny.
Itoviany amin’ny DIEM io.
Baiboly DIEM dia vokatry ny fandikan-teny niarahan’ireo mpandika teny malagasy avy amin’ny fiangonana maro eto Madagasikara. Azo ampiasaina araka ny fepetra apetraky ny lisansa Creative Commons Attribution-ShareAlike ; Mety misy ny fepetra fanampiny mihatra.
Voaova farany tamin’ny 23 Oktobra amin’ny Mijanona ho « i » ihany ny fanoratana raha renifeo no manarakaraka ilay ioda na iota ohatra: Mihevitra ny mpandika teny fa maro gsy teny tranainy no efa tsy azon’ny mpamaky ankehitriny intsony ny heviny noho izy tsy fandre andavanandro na koa efa niova hevitra ka izany no isan’ny nanosika azy ireo hanao dikan-teny vaovao.
Niverina amin’ny teny fototra tokoa ny mpandika teny rehefa tena lavitra ny fanonona grika na hebreo ny fanoratana na ny fanononana frantsay; izany no anoratana hoe Joany frantsay: Tsy nahitana izany firy ny Baiboly katolika malagasy tranainy.
Hita koa ny hoe Kanahana baibolj tsy Kanana na Kanaana hebreo: Izany no antony ampiasan’ny mpandika teny ny teny malagasy tenenina sy soratana amin’izao taonjato izao.
Nifamadika amin’ny nandrasana ny zavatra sasany toy ny nanoratana ny Ismaely ho Jismaela ao amin’ny dikan-teny vaovaon’ny Baiboly katolika ka nanoloana ny « i » izay efa nanakaiky ny fanononana tena izy ho gasu. Izany dia vokatry ny fikatsahana ny hanakaiky ny fanononana amin’ny teny fototry ny Baiboly hebreo na grika.
Baiboly amin’ny finday
Ohatra ny Katolika izay misafidy amin’ny ankapobeny ny fanononana manakaiky ny an’ny teny frantsay dia tsy nanoratra hoe Bibla fa Baiboly ihany koa.
Ny anarana mponina dia tsy miafara amin’ny hoe – nina Ohatra: Ireto avy ny anaran’ny boky ao amin’ny Testamenta Taloha: Toy ny Baiboly protestanta dia misy ny Baiboly amin’ny dikan-teny tranainy izay ahitana ny anaran’Andriamanitra hoe Iahve sy ilay Baiboly tsy ahitana an’io anarana io.
Isiraely fa tsy Jsiraely ; Isimaela fa tsy Jsimaela sns. Efa nivoaka tamin’ny taona ny Soratra Grika Kristianina izany hoe ny Testamenta Vaovao nefa nohavaozina indray ny dikan-teny tamin’io fanontana farany io. Ny Baiboly protestanta no nampiasain’ny Vavolombelon’i Jehovah eto Madagasikara talohan’ny namoahany ny dikan-teny azy manokana.
Baiboly amin’ny teny malagasy
Misy koa anefa ny nofaranana amin’ny – o fotsiny. Tsy ny mpadika teny malagasy no nisafidy izany fa hatramin’ny dikan-teny anglisy New World Translation of the Holy Scriptures. Tsorin’ny mpandika teny fa tsy nadika mivantana avy amin’ny teny fototra hebreo sy grika ary aramianina ny Baibolin’ny Vavolombelon’i Jehovah amin’ny teny malagasy.
Amin’ny fanagasiana ny anarana sy teny hebreo na grika dia tsy ny hebreo na ny grika avy hatrany no niaingana amin’ny ankapobeny fa ny fanoratana na ny fanononana frantsay.
Vokatr’izany reny misy ny fifanakaikezan’ny anarana sasany amin’ny fanoratana an’izany ao amin’ny Baiboly protestanta ny toy ny hoe Jiosy fa tsy JodyHagay fa tsy Akjea.
Vao nanavao ny dikan-tenin’ny Baiboliny ny Katolika malagasy ka ahitana fahasamihafana araka endrika raha ampitahaina amin’ny dikanteny mahazatra ny mpamaky teo aloha. Tamin’ny taona no nahavitana printy ny Baiboly katolika voalohany amin’ny teny malagasy nefa amin’izao dia ampiasaina ilay vita tamin’ny taona Milaza ny mpandika teny fa nalaina amin’ny teny fototra, dia ny hebreo sy grika, ny dikan-teny nataony, nefa hita ihany fa misy ireo zavatra sasany izay notakarina avy tenj Baiboly protestanta amin’ny teny anglisy.
Nanaraka an’io avokoa ny mpandika teny rehetra taty aorianana inona na inona fiangonana misy azy. Ireto tey ny anaran’ny boky ao amin’ny Testamenta Vaovao: Ny edisiona tamin’ny taona izay nasiam-panitsiana madinika tamin’ny taona no ampiasaina amin’izao.